SHEEKADII ugu weyndeyd, Kulankii Wenger iyo Weah, ku Biiristii kooxda Monaco iyo Madaxweynenimadii uu ku Guuleystay, xiriir Nuucee ah ayaa ka dhexeeya?
Monday, May 20th, 2019 - 13:35:20
Saturday August 25, 2018 - 10:53:48 in Wararka by Muuse Cabdi
ARSENE WENGER ayaa ammaan u jeediyay laacibkii hore ee George Weah oo si weyn uga soo dhalaalay kubadda cagta Qaaradda Afrika ugu dambeynna noqday Madaxweynaha dalka Liberia, wuxuuna ku sheegay sheekadii ugu weyneyd ee Taariikhda.
Macallinkii hore ee kooxda Arsenal ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay dalka ku yaalla Galbeedka Afrika Toddobaadkan, markii uu Casuumaad Rasmi ah iyo Billadda Shacabka ee ugu weyn dalkaas ka helay Madaxweynaha Liberia.
Xaflad uu qabtay madaxweyne Weah, oo 51jir ah, oo kusoo koray Qaaradda Yurub, markii uu ka tegay Kubadda Cagta ee dalka Cameroon halkaas oo Wenger oo macallin ka ahaa Monaco uu geeyay Sanadkii 1988-dii.
Claude le Roy, macallinkii hore ee xulka Faransiiska ayaa sidoo kale Ammaanay, Ninkan.
Waxaa lagu soo iibsaday £50,000 iyadoo uu Weah usoo ciyaaray sidoo kale kooxaha Paris Saint-Germain, AC Milan, iyo ugu dambeyn oo Chelsea iyo Manchester City uu soo maray.
Waayihiisii ugu wacnaa wuxuu ahaa 1995, markaas oo uu noqday Afrikaankii ugu horreeyay ee ku guuleysta laacibkii ugu fiicnaa Dunida – waxaana Abaalmarintaas u gacan geliyay Wenger oo Xafladda martida joogtay ka mid ahaa.
Wenger ayaa kulan la yeeshay Madaxweyne Weah maalin ka hor waxayna isku arkeen Caasimadda Monrovia.
Tababaraha 68-jirka ah, ayaa ka tegay garoonka Emirates bishii May ka gadaal 22 sano oo uu hoggaaminayay, wuxuu sidoo kale daawaday kulan dhexmaray Taageerayaasha Arsenal iyo Manchester United.
Wenger wuxuu yiri: "George Weah Noloshiisu waa Taariikh aan la rumeysan Karin, waxayna diiwaankiisa ku qoreysaa Sheeko xiiso badan.
"Waxaan ugu horreyn leeyahay George ma uusan aheyn Laacibka kaliya ee la Aqbali karay.
"George Weah wuxuu sidoo kale ahaa nin aad u shaqsiyad wanaagsan waxaana kugu filan sida uu uga soo dhalaalay horyaalka France oo aheyd wax aan la rumeysan karin.
"Waxaan weydiiyay saaxiibkey Claude haddii aan wax ciyaartoy weerarka ka ciyaara ah kasoo heli karno Africa, wuxuuna ii sheegay in ay jiraan ciyaartoy sida George Weah oo kale ah.
"Macallin walba halkan ayuu fadhiyaa – Fabio Capello, Marcello Lippi – waxayna qaadanayaan ciyaartoyda marka ay gaaraan (28), markaas oo uu laacibku dhammeystiranyahay.
Madaxweyne Weah ayaa yiri dhankiisa: "Arsene Wenger kaliya ima uusan Barin sida loo ciyaaro ee wuxuu sidoo kale I baray sida looga adkaado Nolosha dhibka badan iyo Bani’aadamnimada."